छोटकरीमा यस हप्ता : (कार्टुन)
विभिन्न पत्र-पत्रिका प्रकाशित कार्टुनहरूलाई यहाँ समावेश गरिएको छ।
अन्नपूर्ण पोस्टको यस कार्टुनमा कोरोना नियन्त्रण र नेतृत्व बारेमा व्यङ्ग्य गरिएको छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट | कार्टून
नागरिक दैनिकको यस कार्टुनमा नेकपाको आन्तरिक विवादको बारेमा व्यङ्ग्य गरिएको छ।
नयाँ पत्रिकाको यस कार्टुनमा समसामायिक घटना बारेमा व्यङ्ग्य गरिएको छ।
बाह्रखरीको यस कार्टुनमा नेकपा विवाद बारेमा व्यङ्ग्य गरिएको छ।
कञ्‍चनपुरको बेलौरीमा प्रहरी र तस्करबीच गोली हानाहान, एक भारतीयको मृत्यु
सीमा क्षेत्रमा गस्ती गरिरहेको इलाका प्रहरी कार्यालयको टोलीले चलाएको गोली लागेर एक तस्करको मृत्यु भएको छ। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका ७ पौलाहामा प्रहरी र तस्करबीच गोली हानाहान भएको हो।
छोटकरी सम्पादक 12 घण्टा पहिले
म्यान्मारमा '३८ जनाको मृत्यु, कू यताकै रक्तपातपूर्ण दिन'
म्यानमारमा सेनाको आक्रमणबाट बुधबार एकैदिन ३८ जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको छ । नेतृ आङ सान सुकीलगायत नेताहरुको रिहाइको माग गर्दै म्यानमारमा १ महिनाभन्दा लामो प्रदर्शन भइरहेको छ ।
छोटकरी सम्पादक 13 घण्टा पहिले
एक विधवा महिला, जसले ६ सय विवाहित पुरुषहरूको खुलेआम कत्लेआम गरिन्!
जूलिया टूफाना मेकअपको भाँडो (काँचको सिसी)मा विष बोकेर हिँड्ने गर्थीन्। वर्षौसम्म सयौँ व्यक्तिहरूलाई मार्दै रहिन्, कसैलाई कानोकान खबर पनि भएन। टूफना कसरी गर्थीन् हत्या? र सुराक किन कसैले भेट्टाएन? छ सयको हाराहारीमा विवाहित पुरुष 'बलीको बख्रो' बन्न उनीसमक्ष कसरी पुगे? प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दै जाऔँ!
छोटकरी सम्पादक 14 घण्टा पहिले
पाकिस्तान र टर्कीबीच ऐतिहासिक ‘रेल सेवा’ सुचारु हुने
एक दशकदेखि बन्द रहेको पाकिस्तान र टर्कीबीच मालबाहक रेल सेवा आजदेखि सुरु हुने भएको छ। अहिले विश्व बजारमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई फाइदा हुने गरी यो सेवा पुनः सुरु गर्न लागिएको हो।